Akanakisa Curtain Wall System Mugadziri uye Fekitori | Medo
Vazhinji vevagadziri vanotarisira kugadzira hwindo hombe senge keteni madziro. Uku ndiko kutanga kweiyi windows system!
Ultra chengetedzo inovimbiswa ne2.0mm rusvingo ukobvu, patent groove ine akawanda-poindi kukiya, inowirirana sashand furemu, uye 120mm yakasimbiswa mullion nezvimwe.
Chakavanzika kupeta kubhururuka chidzitiro chinosangana zvese zvinoonekwa aesthetics uye anti-mosquito basa. Iyo yakanaka system inotarisira zvese zvese!
GUNGWA REMUDZIMA SYSTEM
MEDO yekugara keteni rusvingo system inowedzera chigadzirwa chigadzirwa chemikova nemahwindo, ichipa imwe yakasarudzika dhizaini mhinduro yehupenyu hwepamba. Innovative system zvinoriumba zvinomhanyisa musangano kugadziriswa, zvichigonesa inoshanda kwazvo kugadzirisa kuyerera. Mhando dzakasiyana siyana dzekushandisa dzinowanikwa: yakajeka yakajeka mhedzisiro, yakatetepa yekuona pamusoro pehupamhi uye rakasimba basa. Iyo nyowani sisitimu inosanganisa dheshi uye inotakura dhizaini inogadzira yakakura kwazvo yakajeka mhedzisiro: yakagadziriswa pani uye yakavhurika panellook zvakafanana kubva kunze, izvo zvisati zvamboitika mumakambani ese ekuvaka.
MEDO Residential Curtain Wall Systems inopa hunyanzvi mhinduro mhinduro kune yega projekiti uye nzvimbo saiti.
Chinhu cheImba Yemahara
Curtain walling system inokodzera kugadzira dzimba nekuratidzwa kwegirazi hombe, kukwirira kwese kwezvivakwa kunogona kuzvibatsira kubva pasi kusvika kugirazi girazi rakaturikidzana pauriri hwakati wandei uye kunyangwe rakagara rakakomberedzwa rakananga pasi pechikwiriso chedenga.
Anochinjika Magirazi Magirazi
Kaviri-paburi dhizaini dhizaini
Yakapetwa-groove dhizaini dhizaini nemhepo inovhara sisitimu yeese maviri kufefetedza basa uye kumwe kuchengetedzeka.
Magirazi matatu ane maviri spacers
Girazi nhatu dzine maviri spacers ekukwirira kuita mukuvhara izwi uye kupisa kwekushisa. Huru hwakakura hwekupisa hwekuita kuri nani kupisa.
Flush furemu uye bhandi, kukwirira kuiswa chisimbiso
Flush furemu uye bhandi
Yakanaka yekudzivirira mweya
Kunoshamisa kusimba kwemvura
Flush furemu uye bhandi neakachena uye ane fashoni maonero. EPDM inoumbwa nemabhasiketi ekusimbisa mweya uye kuomesa kwemvura.
Pry-inodzivirira yekukiya poindi uye muchengeti anopa yakawedzera kuchengetedzeka uye inovandudza mhepo mutoro yekumira kuita kweiri nani kumesa mweya uye kusimba kwemvura. Pasina mubato inopa yakasununguka yekugara chiitiko neimalist chitarisiko, akatsetseka dhizaini dhizaini, uye yakanyarara mashandiro. Vashandisi vanogona kuzorora nekuchengetedzwa kwewindo kunyangwe mune yakashata badlim neyakafoira mudziyo wakachengeteka.
Pashure: Bi Kupeta Sisitimu
Zvadaro: Slim Simudza & Slide Sisitimu